Faransiiska oo markale bandaw lagu soo rogay. | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Faransiiska oo markale bandaw lagu soo rogay.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa xayiraad hor leh ku soo rogay dalkaas mudo afar todobaad ah oo ka bilaabmaysa Sabtida. Hadal uu ka jeediyey telefishanka ayuu madaxweynuhu go’aanka ku shaaciyey waxaanu sheegay in la xidhi doono suuqyada waaweyn iyo iskulladaba.
Waa markii seddexaad oo muddo laba sano gudahood dalka Faransiiska xayiraado lagu soo rogo, kadib markii cudurka safmarka uu saameyn ba’an u geystay dalkaasi.
Madaxweyne Emmanuel Macron ayaa waxaa uu sheegay in waxbarashada lagu qaadan doono qaab online ah laga bilaabo isbuuca soo socda.
Wuxuu sheegay inuu ogyahay saameynta ka dhalan karta in isbeddelo lagu sameeyo jedwalka waxbarashada, laakiin wuxuu sheegay inay tahay talaabada kaliya ee lagu dammaanad qaadi karo badqabka caafimaad ee caruurta.
”Waan ogahay in fulinta isbedelladani ay si wayn u saamaynayso waalidiinta iyo ardayda iyo qoysaskoodaba. Laakiin waa sida keliya ee ku haboon ee fayraska aan ku xakamayn karayno inaga oo aan waxbarashadii aan dhaawacayn iyo mustaqbalka caruurteenaba”, ayuu yiri Macron
Faransiiska oo markale bandaw lagu soo rogay. was last modified: April 1st, 2021 by Admin
Dhageyso+Sawiro:-Saameynta uu ku leeyahay cudurka safmarka Covid-19 ee bulshada dexdeeda
Saddex nin oo burcadnimo loo haysto oo lagu qabtay Muqdisho (SAWIRRO)
Wasiiru dowlaha Arrimaha Gudaha oo ku guuleystey doorashada Aqalka Sare